Xisaabinta Daruuraha: Faa'iido-darrooyinka Dhinaca kale ee qadaadiic ah! | Laga soo bilaabo Linux
Xisaabinta Daruuraha: Faa'iido darrooyinka - Dhinaca kale ee qadaadiic ah!
Linux Post Ku Rakib | | Casharrada / Buugaagta / Talooyinka, dhowr
Maqaalka hore ee mowduuca, oo la yiraahdo «XaaS: Xisaabinta Daruuraha - Waxwalba Adeeg ahaan«, Taas oo muujisay faa'iidooyinka, faa'iidooyinka, faa'iidooyinka iyo astaamaha kale ee hadda jira iyo mustaqbalka ee Kombuyuutarada Cloud, waxaa caddayn u ah iyadoo aan loo eegin wax kasta oo ay tani u muuqato inay tahay waddada loo sii marayo ganacsiga tikniyoolajiyadda hadda jira iyo adduunka ganacsiga.
Si kastaba ha noqotee, lama taaban ama qoto dheer dhinacyada taban ama faaiido darrada u leh teknolojiyadda la yiri muwaaddinka caadiga ah, bulshada cabbirkeeda habboon iyo in yar habka loo wajahayo marka laga eego aragtida falsafadda Software-ka Bilaashka ah iyo GNU / Linux. Marka qoraalkan waxaan uga hadli doonnaa dhinacyadan si aan u sameyno isku dheelitirnaan caddaalad ah oo ku saabsan macluumaadka ku saabsan teknolojiyadda la yiri.
Isticmaalayaasha iyo macaamiisha barnaamijyada iyo adeegyada ku saleysan xisaabinta daruuriga aasaasiga ah waxay u baahan yihiin in la damaanad qaado helitaanka iyo marin u helkooda, iyo in adeeg bixiyayaashoodu ay ku dabaqaan ku habboonaanta iyo daruuriga nabadgelyada iyo habdhaqanka asturnaanta iyo teknoolojiyada si loo yareeyo khataraha iyo guuldarrooyinka ay la kulmaan tikniyoolajiyadda noocan oo kale ah iyadoo ku saleysan gebi ahaanba daruurta.
Waxay u baahan yihiin dammaanad-qaadkan si ay awood ugu yeeshaan inay go'aannadooda ganacsi ku saleeyaan macluumaad adag oo sal-adag oo hagaagsan iyo xaalado shaqo. Tani waxay ka dhigan tahay in ciyaartooyda ugu waaweyn ee tikniyoolajiyaddan, taas oo ah, bixiyeyaasha, ay si joogto ah u duqeynayaan codsiyada xisaab-celinta.
Laakiin marka lagu daro guuldarrooyinka suurtagalka ah, khataraha ama weerarada ay la kulmi karaan tikniyoolajiyaddan, sidoo kale waa run in iyada ama falsafadeeda hawlgalka la arki karo gebi ahaanba ka soo horjeedda waxa dad badani u bogaadin karaan ama u arki karaan shaqsiyad ahaan ama madaxbannaanida wadareed ama xorriyadda.
1.1 Khataraha amniga
1.1.1 Maamul lumis
1.1.2 Isku xidhka
1.1.3 Khaladaadka daboolka
1.1.4 Khataraha u hoggaansamida
1.1.5 Isku-xirnaanta maareynta maareynta
1.1.6 Ilaalinta xogta
1.1.7 Tirtirida xogta aan dhameystirneyn ama aan sugneyn
1.1.8 Xubin xaasidnimo ah
1.2 Khataraha la xiriira xorriyadda
1.2.1 Barnaamijka bilaashka ah ee ka soo horjeedka Software-ka gaarka loo leeyahay
1.2.2 Software bilaash ah oo ka soo horjeedda Cloud Computing
Khataraha amniga ee daruuraha xisaabinta ayaa si wax ku ool ah loo yareeyay faa'iidooyinka amniga gaarka ah ee ay bixiyaan iibiyeyaal kala duwan. Xisaabinta daruurta, lafteeda, waxay leedahay awood aad u fara badan oo lagu hagaajiyo amniga iyo iska caabinta guul darrooyinka ama weerarada. Si kastaba ha noqotee, khataraha ugu waaweyn marka laga hadlayo amniga ee ka dhici kara xisaabinta daruuriga, waa:
Kaabayaasha daruuraha ayaa saameyn kara marka macmiil ama isticmaale ka quusto xakamaynta walxaha farsamada qaarkood ee saamaynta ku yeelan kara nabadgelyada isla bixiyaha daruurta ku jira. Ama liddi ku ah marka bixinta adeegyadu ay sheegaan adeeg bixiyaha daruuraha uusan daboolin dhinacyada amniga, taasoo abuuri karta "daldaloollo" xagga difaaca amniga.
Macaamiil ama isticmaale ayaa laga yaabaa inuu si dhow ugu xirnaado adeeg bixiyaha daruurta, lagana hor istaago inuu dib u noqdo, taas oo ah, deegaanka gudaha (maxalliga ah) IT, haddii heshiisyada la gaadhay aysan damaanad ka qaadaynin in aaladaha, habraacyada, qaababyada xogta ee qaabaysan ama isku xirnaanta adeegyadu ay damaanad qaadayaan u-adeegsiga adeegga, codsiyada iyo xogta. Sida caadiga ah, guuritaanka macmiilka ee hal adeeg bixiye kale ama u guurista xogta iyo adeegyada ama gudaha, nidaam aad u adag oo aan macquul aheyn.
Guul darrooyinka ama weerarada lagu qaado farsamooyinka kala soocaya keydinta, xusuusta, dariiqa, ama isu ekeysiinta bixiye (Guest Hopping Attack) badiyaa ma aha mid aad u soo noqnoqda iyada oo ay ugu wacan tahay heerka kakanaanta, laakiin dhibaatadu kama dhigayso iyaga wax aan macquul ahayn in la fuliyo.
Khataraha u hoggaansamida
Marar badan sababtoo ah sida qaaliga ah ama casriga ah ee tiknoolajiyada noocan ah u noqon karto, bixiyeyaasha isku mid ah waxay isku dayayaan inay yareeyaan kharashyada ku saabsan shuruucda ama shuruudaha waaxda, taas oo mustaqbalka fog khatar gelin karta geeddi-socodka u guurista daruuraha ama hawlgalka horeyba ugu jiray khadka tooska ah. Kiisaska kale waxaa laga yaabaa in isticmaalka kaabayaasha loo isticmaalo daruuraha uusan gaari karin heerar cayiman oo waafaqsan u ballanqaadka isticmaalayaasha iyo macaamiisha.
Isku-xirnaanta maareynta maareynta
Is dhexgalka maareynta macmiilka ee daruur bixiye badanaa waxaa laga heli karaa internetka, maxaa iska dhigi kara khatar sare oo xagga amniga ah, gaar ahaan marka lagu daro teknoolajiyada fog ee helitaanka ama siyaasadaha, marka lagu daro jilicsanaanta caadiga ah ee daalacashada internetka.
Mararka qaar loogu talagalay isticmaale ama macaamil bixiyaha daruuriga daruuriga si ay si wax ku ool ah u xaqiijiso in adeeg bixiyaha uu u adeegsanayo ama u fulinayo hababka maareynta xogta saxda ah ama ugu wanaagsan, xoogaa way adagtahay, marka way kugu adagtahay inaad hubiso in xogta loo maamulay si sharciga waafaqsan. Marka la eego, badiyaa waxay kaliya u baahan yihiin inay u degsadaan warbixinno fudud oo ku saabsan dhaqankooda maareynta xogta ama soo koobid shahaado oo ku saabsan dhaqdhaqaaqyadooda ku saabsan dhinacyada ka shaqeynta xogta iyo amniga, iyo xakamaynta xogta ay marayaan.
Tirtirida xogta aan dhameystirneyn ama aan sugneyn
Kiis kale oo la mid ah kii hore (Xogta Difaaca), waa goorma adeegsade ama macaamil bixiyaha daruuriga kumbuyuutar kumbuyuutar ma leh suurtagalnimada dhabta ah ee si hufan loogu xaqiijin karo isku mid si kama-dambays ah u tirtiraya xog kasta oo la codsaday, maaddaama mararka qaarkood hababka caadiga ah laftoodu aysan si dhammaystiran u baabi'in xogta. Sidaa darteed, wadar ahaan ama tirtirid xog kasta waa wax aan macquul aheyn ama aan loo baahneyn, marka laga eego aragtida macmiilka iyo bixiyaha, sababo kala duwan awgood.
Xubin xaasidnimo ah
Dhaawaca xubnaha xun waa dhif iyo naadir, laakiin badiyaa markay dhacdo waxay si daran u dhaawacdaa.
Khataraha la xiriira xorriyadda
Si loo helo qodobkaan waxaa wanaagsan inaan soo xigano xigashada soo socota ee Richard Stallman:
Internetka, softiweerku ma ahan habka keliya ee lagu lumiyo xorriyaddaada. Adeegga beddelka barnaamijka (SaaSS), taasi waa in la yiraahdo, "noqo ku xigeen "Bedelka Software" waa qaab kale oo lagu kala fogeeyo awoodda kumbuyuutarkaaga.
Barnaamijka bilaashka ah ee ka soo horjeedka Software-ka gaarka loo leeyahay
Sidaan aragnay munaasabadaha kale, Tan iyo markii Dunida Horumarinta Software-ka ay bilaabatay, ficil ahaan isla waqtigaas Software-ka Bilaashka ah iyo Furan (SL / CA) waxay la noolaayeen Software-ka Khaaska ah iyo midka Xiran (SP / CC). Kuwani had iyo jeer waxay kujiraan safka hore marka loo eego waxa badanaa loo fasirto inay khatar ku yihiin xakamayntayada kumbuyuutarradeena iyo macluumaadka gaarka ah iyo kuwa shaqsiyadeed.
Hanjabaadani waxay inta badan muujisaa iyada oo loo marayo soo bandhigida astaamo xun ama hawlo aan loo baahnaynsida spyware, albaabada dambe iyo maaraynta xakamaynta dhijitaalka ah (DRM). Taas oo si cad u soo bandhigta asturnaantayada iyo amniga, waxayna yareysaa madax-bannaanideena iyo xorriyaddayada.
Sidaa darteed, horumarka iyo adeegsiga SL / CA wuxuu had iyo jeer ahaa xal macquul ah oo looga hortago SP / CC. Sababtoo ah afar (4) xorriyado muhiim ah, oo horeyba caan ugu ahaa dadka oo dhan. Xorriyadaha dammaanad ka qaadaya in annaga, isticmaaleyaashu, aan xakameyno waxa lagu sameeyo kombuyuutarradeena iyo internetka.
Software bilaash ah oo ka soo horjeedda Cloud Computing
Si kastaba ha ahaatee, soo bixitaanka cusub ee 'Cloud Computing' wuxuu soo bandhigayaa qaab aad u duufsan oo cusub in dhammaan (Isticmaalayaasha, macaamiisha, muwaadiniinta iyo ururada, kuwa guud iyo kuwa gaarka ah), ay ka tanaasulaan xakamaynta howlaheena, iyadoo loo daneynayo xoriyadayada (loo maleynayo) iyo xitaa raaxada iyo horumarka.
Isku soo wada duuboo, markan waxa soo socda ayaa laga odhan karaa Saamaynta la midka ah ee Kombuyuutarada Cloud (ama Adeegyada Daruuraha / SaaS) iyo Software-lahaanshaha:
waxay u horseedaan natiijooyin waxyeello la mid ah, laakiin farsamooyinku way ka duwan yihiin. Iyada oo la adeegsanayo softiweeriyada macaamiisha ah farsamadu waa inaad adigu leedahay oo aad isticmaasho nuqul ay adag tahay iyo / ama sharci darro in wax laga beddelo. SaaS farsamadu waa inaadan haysan nuqul aad ku qabanaysid hawshaada xisaabinta.
Oo haddaba, annagu awoodi kari weyno inaan wax ka beddelo, ma garan karno waxa ay dhab ahaantii ku sameyso xogtayada iyo macluumaadka shaqsiyadeed.
Maaddaama qodobkani gaar yahay mid aad u ballaaran, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad aqriso maqaalka buuxa Richard Stallman ku saabsan.
Dhammaan halista aan kor ku soo xusnay kama wada tarjumayaan amar gaar ah oo muhiim ahSaas ma aha, waxay si fudud u qeexeen muuqaalka hadda ee halista ka dhici kara masraxa xisaabinta daruuriga ah.
Khataraha isticmaalka daruuriga xisaabinta waa in lala barbardhigo halista ka dhalankarta xalinta dhaqamada, sida moodooyinka kaabayaasha gudaha ama kuwa maxalliga ah. In kasta oo ganacsi, heer warshadeed ama ganacsi haddana faa'iidooyinka badiyaa ay badan yihiin, dhacdada halista fudud ee kuwa aan kor ku soo sheegnay waxay sababi kartaa fashilaadda ganacsiga oo dhan, ama dhaawac culus u geysta sumcaddeeda, iyada oo aan la helin ama aan lahayn cawaaqib sharci.
Iyo inkasta oo uusan joogin joogitaankii ugu dambeeyay, lumis aad u weyn marka la eego madax-bannaanida iyo xorriyadda, gaar ahaan marka loo adeegsado dadka isticmaala yar yar sida shaqsiyaadka, bulshada, dhaqdhaqaaqa ama bulshada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Xisaabinta Daruuraha: Faa'iido darrooyinka - Dhinaca kale ee qadaadiic ah!
Beatriz Aurora Pinzon dijo
Maqaal aad u fiican
Jawaab ku sii Beatriz Aurora Pinzón
Sababaha aan loo isticmaalin Microsoft Windows
Aasaaska Barnaamijka 'Apache Software Foundation' wuxuu ku dhawaaqay isdhexgalka GitHub